वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर : कुन बैंकको कति ? - DURBAR TIMES
HomeBankवाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर : कुन बैंकको कति ?
वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर : कुन बैंकको कति ?
वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बैंकहरुले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नबिल बैंकले नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ ब्याजदर अनुसार बैंकले बचत खातामा न्यूनतम ३.१ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.५१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको उल्लेख छ । व्यक्तिगत मुद्दतिमा अधिकतम ७.५१ प्रतिशत ब्याज पाइन्छ भने ३ महिनाको मुद्दतिको ब्याजदर ५.५१ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यस्तै, घर कर्जाका लागि न्यूनतम ८.४९ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा दिने उल्लेख छ ।
प्रभु बैंकले बचत खातामा न्यूनतम ३.२५ प्रतिशतदेखि देखि अधिकतम ४ प्रतिशतदेखि सम्म ब्याजदर तोकेर नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । यता, मुद्दति निक्षेपमा भने ७.७५ प्रतिशतदेखि ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरिएको छ ।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक
एनसीसी बैंकले विभिन्न खातामा भदौ १ गते बाट लागु हुने गरी नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको व्याजदर अनुसार विभिन्न बचत खातामा २ दशमलव ५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म व्याज दिइने छ यस्तै, मुद्दती निक्षेपमा ६ दशमलव ५० प्रतिशतदेखि ८ दशमलव २६ प्रतिशतसम्म व्याज दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
एनआइसी एशिया बैंक
एनआइसी एशिया बैंकले समेत नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बचतको ब्याजदर २.५६% कायम गरेको उल्लेख गरेको छ । नयाँ ब्याजदर अनुसार मुद्दति निक्षेपमा ७.५६% सम्म ब्याज पाइने जनाइएको छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंक
प्राइम कमर्सयल बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार २.७६ प्रतिशतदेखि ४.५ प्रतिशत व्याजदरसम्म कायम गरिने भएको छ । यस्तै, व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७.७६ प्रतिशत कायम छ भने न्यूनतम ७.५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यता, स्थिर कर्जाका लागि न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि बढीमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको जनाइएको छ ।
लक्ष्मी बैंकको सार्वजनिक व्याजदर अनुसार बचत खातामा न्यूनतम २.५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरिएको छ । यस्तै, मुद्दति व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशतदेखि ७.५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर कायम गरेको छ ।
कुमारी बैंकले भने बचत खातामा न्यूनतम २.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ३.५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ६ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेको हो । यस्तै, बैंकले स्थिर कर्जामा न्यूनतम ९.९९ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.४९ प्रतिशतसम्ममा कर्जा दिने उल्लेख छ ।
सिटिजन्स बैंकले बचतमा न्यूनतम ब्याज ३ प्रतिशतदेखि र अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म कायम राखेको छ । यस्तै, व्यक्तिगत मुद्दतिको अधिकतम ब्याज ७.५० प्रतिशत कायम छ । स्थिर कर्जाको हकमा १०.५० प्रतिशतदेखि देखि १३ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ ।
बैंक आफ काठमान्डू
बैंक आफ काठमान्डूले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार बचतको न्यूनतम ब्याज २.५० प्रतिशत र अधिकतम ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यता, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ब्याज ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार बचतमा न्यूनतम २.५ प्रतिशत देखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम रहने उल्लेख छ । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा भने ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिनेछ । बैंकले न्यूनतम ८.४९ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.४९ प्रतिशतसम्म स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरेको उल्लेख छ ।
कृषि विकास बैंक
कृषि विकास बैंकले सार्वजनिक गरेको व्याजदर अनुसार बचतको न्यूनतम ब्याज ३.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । यता, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याज ७.५० प्रतिशत कायम छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको व्याजदर अनुसार बचतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम राखेको छ । यस्तै, मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ६ प्रतिशतदेखि ७.२५ प्रतिशतसम्मको व्याजदर कायम गरिएको छ । यता, स्थिर कर्जामा ९ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
नेपाल बैंकले सार्वजनिक गरेको व्याजदर अनुसार बचतको न्यूनतम ब्याज ३.०५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.५५ प्रतिशतसम्म कायमे छ । यता, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ८.५ प्रतिशतसम्म कायम रहेको छ । यता, स्थिर ब्याजको न्यूनतम ब्याजदर ९.४९ प्रतिशतदेखि १२.४९ प्रतिशतसम्म कायम छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले सार्वजनिक गरेको व्याजदर अनुसार बचतको न्यूनतम ब्याज २.०५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ । यता, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याज ७.०५ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले स्थिर ब्याजदरको लागि भने न्यूनतम ९.८९ प्रतिशतदेखि अधिकतम १२.२४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको उल्लेख छ ।
नेपाल एसबीआई बैंक
नेपाल एसबीआई बैंकले सार्वजनिक गरेको व्याजदर अनुसार बचतको ब्याज २.५५ रहेको छ । बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ७.५५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरेको छ ।
सिभिल बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा बचतमा न्यूनतम ४.०५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.०५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिने उल्लेख छ । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ न्यूनतम अधिकतम ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने छ ।
सनराइज बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा बचतमा न्यूनतम २.५७ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाइएको छ । यता, मुद्दति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ७ प्रतिशत ब्याज कायम गरेको छ । बैंकले स्थिर ब्याजदरको लागि न्यूनतम १०.५० प्रतिशतदेखि अधिकतम १३.५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंक
नेपाल बंगलादेश बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा बचतको न्यूनतम ब्याजदर २.५० प्रतिशत कायम छ । यता, व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा न्यूनतम ७.२५ प्रतिशत कायम छ भने अधिकतम ब्याज ७.५० प्रतिशत कायम रहेको छ । स्थिर कर्जाका लागि बैंकले न्यूनतम ९.९९ प्रतिशतदेखि अधिकतम १२.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको छ ।
Previous articleमहालक्ष्मी-सिप्रदि सम्झौता : यी गाडी किन्दा महालक्ष्मी विकास बैंकले ऋण दिने
Next articleबैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपिओ र शेयर लिलामीको आयकर तिरेनन्
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितोपत्र बजार पूँजीकरण १० प्रतिशतले घट्यो
सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दै
अब मोटर बाटो नपुगेको जग्गासमेत बैंकमा धितो राख्न मिल्ने
कृषि तथा हस्तकला व्यवसायले रु १ करोडसम्मको कर्जामा विशेष सहुलियत पाउने
२७ वटा बाणिज्य बैंकहरुको लाभांश दिने क्रम नबिलदेखि एसबीआईसम्म, कुन बैंकको कति ?
माध्यमिक तहसम्म नैतिक शिक्षा : आजको आवश्यकता
सहसचिवको नतिजा सार्वजनिक(नतिजा सहित)
साउनमा मात्रै साढे २४ करोड बढीको लसुन, प्याज आयात: कुन देशबाट कति आयो ?
महोत्तरीको मुख्य भन्सार आजदेखि विधिवतरूपमा सञ्चालन
दशैंका लागि तनहुँमा तीन करोडको खसीबोका बिक्री
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिएपनि सहज भएन तरलता समस्या